Site Engineer | Authentic Group ﻿
23.7.2019, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Finishing နှင့် တွင်းအပြင် အလှအပများ စစ်ဆေးရမည်။
•	Architectural & Interior design ကိုစိတ်ဝင်စားပြီး Construction working drawing များဆွဲရမည်။
•	Auto CAD/ Photo Shop ကျွမ်းကျင်ရမည်။
Site Engineer (Interior Designer)
•	AGTI / B.E(Civil) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် (၂၀ မှ ၃၀)ကြားဖြစ်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်အထက်ရှိရမည်။
27 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
● တငျဒါလုပျငနျး process လုပျကိုငျဖူးသူဖွဈရမညျ။ ● အစိုးရရုံးမြား ဝငျထှကျသှားလာနိုငျသူဖွဈရမညျ။ ● ဆောကျလုပျရေး နယျပယျ Sale အတှအေ့ကွုံရှိသူဖွဈရမညျ။ ● လကျရှိ Client မြားနှငျ့ keep in touch ဖွဈရမညျ့အပွငျ New Clients မြားက� ...
•	Civil Work &M&E လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သတ်ပြီးလုပ်ကိုင်ရမည်။ •	Management ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Team Work ဖြင့်ဦးဆောင်လမ်းညွှန်ရမည်။ •	မိမိလက်အောက်ရှိ ၀န်ထမ်းများအား အလုပ်တာဝန် ခွဲဝေခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအ‌ပေါ်တာဝန်ခံမှု၊� ...
● Factory Expenses Data entry to Peachrteer software. ● Journal entries to Peachrtree software. ● Checking invoice for local purchase of factory Accessories and arrange to pay cash to vendor. ● Preparation Inventory (In, Out, Balance) Statement. ● Handle full sets of accounts including AP,AR,GL and Fixed assets. ● Prepare payroll functions to ensure that employees are paid in timely and accurate manner,overtime computations and time sheet verification.
37 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
• planning publicity strategies and campaigns • writing and producing presentations and press releases • dealing with enquirers from the public, the press, and related organizations • organizing and attending promotional events such as press conferences, open days, exhibitions, tours and visits • speaking publicly at interviews, press conferences and presentations • providing clients with information about new promotional opportunities and current PR campaigns progress • analyzing media coverage • commissioning or underta ...
● (Microsoft word, Excel, Page Maker, Power point, Internet, Typing) ကြှမျးကငျြစှာအသုံးပွုနိုငျရမညျ။ ● အဖှဲ့အစညျးစိတျဓာတျဖွငျ့ အလုပျလုပျနိုငျရမညျ။ ● တငျဒါလုပျငနျးပိုငျးနှငျ့ ပတျသတျပွီးလုပျငနျးအတှအေ့ကွုံရှိသူ ဦးစားပေးမညျ။
45 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	မွို့ပွရရေေးဝရေေးလုပျငနျးတှငျ လမျး၊ တံတား၊ လူသှားလမျး(ပလကျဖောငျး)၊ Corvelt Box လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံရှိသူကို ဦးစားပေးမညျ။ •	Drawing နှငျ့ Design ပိုငျး သိရှိပွီး Site Engineer နှငျ့ Sub Contractor မြားအား လုပျငနျးပိုငျးကောငျးမှနျစှ� ...
Senior Quality Surveyor (Mechanical)
•	မွို့ပွရေးပေးဝရေေးလုပျငနျးတှငျ ပိုကျဆကျ၊ ပိုကျခြ၊ House hold Connection (အိမျသုံးရမေီတာတပျဆငျခွငျး)မြားကို နားလညျတတျကြှမျးသူကို ဦးစားပေးမညျ။ •	Dutile Iron Pipe (DI), HDPE pipe, uPVC pipe တို့ကို BOQ တှကျခကျြခွငျးကြှမျးကငျြ ပိုငျနိုငျရမ� ...
50 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
● Tenderပိုငျးဖွငျ့ အတှအေ့ကွုံရှိသူဖွဈရမညျ။ ● Computer ကြှမျးကငျြစှာ အသုံးပွုနိုငျရမညျ။ ● (Microsoft word,Excel,PageMaker, Typing,Photoshop,Internet,Email,Typing) အထူးကြှမျးကငျြစှာအသုံးပွုနိုငျရမညျ။ ● အဖှဲ့အစညျးစိတျစါတျဖွငျ့ အလုပျလုပျနိုငျရမညျ။
Construction Site Manager(Yangon)
61 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Construction Site အတွက် Safety နှင့် လုံခြုံရေးအပိုင်းတွင် သေချာစွာစစ်ဆေးပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ •	Site တွင်ရှိသော ၀န်ထမ်းများ၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများအား အထက်လူကြီးများထံ မှန်ကန်စွာတင်ပြနိုင်ရမည်။ •	Site Pressureများအား ...
Store Head(For Site)(Pathein)
Store Manager(For Site)(Yangon)
69 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Civil Work &M&E လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သတ်ပြီးလုပ်ကိုင်ရမည်။ •	မိမိ အလုပ်တာဝန် ခွဲဝေခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအပေါ်တာဝန်ခံမှု၊တာဝန်ယူမှုရှိရမည်။ •	Store အ တွင်းလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို အကောင်းဆုံးန� ...
•	Logistic ပိုင်းနှင့် Transportation အပိုင်း အဓိက လုပ်ဆောင်ရမည်။ •	ကားအသေးလေးမှစပြီး ပေ၄၀တွဲ ကားအထိ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ဋ္ဌားရမ်းပေးရမည်။ •	Crane/Backhoe/Roller စတဲ့ ယန္တားများကိုလည်း နေရာ မရွှေး ဋ္ဌားရမ်းနိုင်မည့် link များရှိရ ...
Site Engineer (Civil/Mechanical)
120 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
216 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
218 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
243 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
255 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
256 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
262 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
264 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
278 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
305 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
Site Engineer Engineering & Technical jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Authentic Group Engineering & Technical jobs Engineering & Technical jobs Site Engineer Jobs in Myanmar, jobs in Yangon